MW Farmaajo ayaa xalay xarunta Villa Somalia kula kulmay Cabdicasiis Lafta-gareen… – Hagaag.com
MW Farmaajo ayaa xalay xarunta Villa Somalia kula kulmay Cabdicasiis Lafta-gareen…
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay xarunta madaxtooyada kulan saacado badan qaatay kula yeeshay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xassan Maxamed Lafta-Gareen.
Lafta-Gareen kama uusan mid noqon madaxweynayaashii ka qeybgalay shirkii Aragti -Wadaag ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Garowe oo inta badan madaxda dowlad gobolleedyada dalka iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed ka qeybgaleen.
Kulanka Madaxweyne Farmaajo iyo Lafta-Gareen oo ahaa mid iyaga u gaar ah oo aan xog badan laga helin ayey haddana warar hoose oo soo baxaya sheegayaan in madaxweyne Farmaajo kala hadlay madaxweynaha Koonfur Galbeed sidii loo bilaabi lahaa doorashada xubnaha Aqalka Sare iyada oo la wafajinayo jadwalka doorasho oo ay soo saareen guddiga wali lagu muransan yahay ee doorashooyinka.
Dhinaca kale waxaa lagu waddaa in kulanka uu ku soo biiro madaxweynaha maamulka Galmudug oo ka mid ahaa madaxdii ka qeybgashay shirkii Garowe.
Inkastoo wali dhinaca dowladda Soomaaliya ku howlan tahay qabashada doorashada ayaa haddana wali waxaa jira kala aragti-duwannaan iyo in aan leysku waafaqsaneyn hannaanka loo marayo doorashada oo madaxda maamul gobolleedyada qaar iyo siyaasiyiinta mucaaradka intaba u arkaan mid lagu degdegayo.